Musharaxiinta: Farmaajo wuxuu dalka kuwadaa god mugdi ah
Posted On 12-04-2021, 11:25AM
MUQDISHO, Soomaaliya - Musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha waqtiga ka dhamaadey Farmaajo "in uu waddanka kusii jiidayo god mugdi ah".
Shir jaraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho ayay taageero weyn ugu muujiyeen talaabadda uu Saadaq John "uga haray maamulka waqtiga ka dhamaadey ee Farmaajo".
Saraakiisha kale ee ciidamadda si gaar ah taliyaha milatariga, Odowaa Yuusuf Raage, iyo taliyaha cusub ee gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayay ku booriyeen in ay ku daydaan Saadaq.
Beesha Caalamka oo door weyn ku leh qabsoomida wadahadaladii u dambeeyay ee qabsoomay ayay cod dheer ugu baaqeen in ay door firfircoon ka cayaarto in waddanka uusan burburin
Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii 19aad ee Soomaaliya oo kamid ahaa musharaxiinta, ayaa ku tartarsiiyey ciidamada in aysan u sacabo madaxweynaha xilligiisu dhamaadey.
"Dhamaan askarta dhalinyaradda Soomaaliyeed oo ciidanka ah oo lasoo shaqeeyay oo ahaa laf-dhabarkii dib-u-habeynta ciidanka oo u sahlay in mid walba uu mushaharkiisa qaato oo u sahlay in mid walba dib-u-habeynta lagu sameeyo; dib-u-habeynta idin kuguma sameynaynin dalkana habeen iyo maalin uma shaqeynaynin in aad aniga isoo weerartaan, ma u sameynaynin in aad dalka dumisaan ma u sameynayn nin waqtigiisu dhamaadey oo raba in xukunka joogo diidana in uu doorasho galo in aad aqbashaan taliye Saadaq ayaa idin kugu filan tusaale," ayuu Khayre ka yiri shirka jaraa'id ee warbaahinta lagu casuumay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka Wadajir, ayaa dhankiisa wuxuu cod dheer kaga digay in la qabyaaladeedyo siyaasadda.
""Taliyaha booliska [Cabdi Xasan Xijaar] waxaan leeyahay Siyaasadda ha qabyaaladeyn. Hadaad qabyaaladeyso siyaasadda oo aad is tiraahdo qabyaalad ku difaac [Farmaajo] foolxumadeeda adigaa qaadi doono. Sidoo kale, waxaan ku baaqeynaa in aan ciidamadda la qabyaaladeyn," ayuu Warsame hoosta ka xariiqay.
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya, ayaa ugu baaqay Farmaajo in uu dhaxal wanaagsan reebo isla markaana waddanka ku hogaamiyo doorasho la isla ogol-yahay.
""Maanta meel fiican ayay joogtaa. Villa Soomaaliya meeshii maqaamka ay ahayd way kasoo dhaaftay. Berri yaan nala arkin anigoo boorsooyinka wadana oo garoonka kasii dhoofeyna. War niyow [Farmaajo] dalka bahdil intaas la eg ha u geysan. Awooda oo qori lagu haysto hortaa jiraa waayey," ayuu ka dhawaajiyey.
Khilaafka doorashooyinka Soomaaliya ayaa taagan tan iyo ku dhowaad sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay. Wadahadalo ay hogaamiyeyaashu yeesheen waxay kusoo idlaadeen fashil.